(Milano) 17 Maarso 2019 – Waxaa caawa ballansan labada camaaliqo ee ciyaaraha Talyaaniga, Yurub iyo caalamka ee AC Milan iyo Inter Milan, kuwaasoo kulankoodu caawa xiise gaar ah leeyahay maadaama ay u hardamayaan boosaska hore.
Dhanka Milan: Macallinka Gattuso ayay safkiisu u dhan yihiin marka laga reebo Bonaventura, balse waxaa booska matoorka khadka dhexe iskula dheggan Bakayoko iyo Biglia, waloow uu ninka hore cad cad yahay. Waxay Milan dheelaysa shaxda 4-3-3, waxaana soo laabtay daafaca Zapata.
Dhanka Inter: Waxaa dhanka Inter Milan ka wada maqan Miranda iyo Joao Mario oo markii hore rajo laga qabey, sidoo Nainggolan. Lautaro Martinez oo shuclada u sidaya weerarka, isagoo nastay kulankii EL oo uu ka ganaaxnaa, Brozovic ayaa isna khadka dhexe ka muuqanaya. Icardi ayaa weli maqan.
25 REINA, 90 A. DONNARUMMA, 20 ABATE, 33 CALDARA, 17 ZAPATA, 7 CASTILLEJO, 21 BIGLIA, 12 CONTI, 93 LAXALT, 16 BERTOLACCI, 11 BORINI, 63 CUTRONE
27 PADELLI, 46 BERNI, 13 RANOCCHIA, 29 DALBERT, 21 CEDRIC, 20 BORJA VALERO, 87 CANDREVA, 11 KEITA
Vrsaljko, Icardi, Nainggolan, Miranda, Joao Mario
Previous articleMW Geelle oo xarigga ka jaray dhismaha Safaaradda Jabuuti ee Muqdisho + Sawirro (Maxaa kale oo uu maanta samayn doonaa?)
Next articleBAABI’INTA BAANJADA: Booliiska Thailand oo loo bilaabay barnaamij lagu dagaallamayo buurnida + Sawirro